Huawei Ma Ọ Bụ Nwunye 9: Ị chọrọ n'ezie ka a 5.9in Phablet? - News Ọchịchị
Huawei Ma Ọ Bụ Nwunye 9: Ị chọrọ n'ezie ka a 5.9in Phablet?
Nnukwu-ekpuchi smartphone na-enwe olileanya jupụta ọdịiche hapụrụ site Samsung si etiwapụ Note 7 na mee Huawei dị ka a adịchaghị handset emeputa
Isiokwu a na-akpọ “Huawei Ma Ọ Bụ Nwunye 9: Ị chọrọ n'ezie ka a 5.9in phablet?” e dere site Samuel Gibbs, n'ihi na theguardian.com on Thursday 3rd November 2016 13.30 UTC
Huawei ọhụrụ smartphone nwere oke 5.9in ihuenyo. Ma dị nnọọ otú nnukwu Ị chọrọ n'ezie ka gị ama na-?
Phablets - smartphones na ihuenyo nha karịrị 5.5in - aghọwo ihe na ọzọ na-ewu ewu, egosi a na-emekarị Mbugharị si ha Asian si malite na US na Europe. ọbụna Apple, ama maka nta smartphones, Ulo oru a phablet na 2014 na iPhone 6 Ọzọ. Ma ole na ole phablets nwere agbatị ha meziri n'ofè 5.7in.
The ọhụrụ € 699 (£ 621) Huawei Ma Ọ Bụ Nwunye 9 nwere a 5.9in zuru HD ngosi, sọrọ ese foto na azụ, bụ 7.9mm oké na-agba na ụlọ ọrụ si ọhụrụ version nke ya ahaziri Android 7.0 Nougat-akpọ mmetụta uche UI 5. Ọ na-nwere Huawei si ọhụrụ processor, nke ụlọ ọrụ na-azọrọ bụ 20% ike karịa ya gara aga ọgbọ na ọzọ dị ike na multi-isi arụmọrụ karịa Apple, Samsung ma ọ Qualcomm si ọhụrụ processors.
Ma, ajụjụ na-anọgide ma na-azụ ahịa na US na Europe na-achọ ndị dị otú ahụ a buru ibu na ihuenyo. Previous iterations nke Onye Òtù akara na e rere en masse na-echekwa, nke pụtara na Nwunye 9 bụ nke mbụ n'ime Huawei si ibu-sized phablets ka eze tụgharịa na UK.
ma ọ bụ nwunye 9 ka na-esote iteration nke Huawei si ngalaba-engineered na Leica sọrọ igwefoto na azụ. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
na odida nke Samsung si Note 7, nke e-atụ anya ga nnukwu na-ere ákwà na phablet Atiya, Huawei na ndị ọzọ nwere ohere jupụta ọdịiche. Ebe ndị ọzọ na-lekwasị nta njedebe nke phablet scale, na Google si Pixel XL na-enwe a 5.5in ihuenyo, Huawei nwere nwara iji lebara ogbenye ndụ batrị na selata nke igwe n'elu oge.
Ime na, na onye Òtù 9 nwere nnukwu 4,000mAh batrị ahụ bụ banyere 500mAh buru ibu karịa ọtụtụ mainstream phablets, gụnyere Pixel XL, tinyere a mmụta dabeere na usoro, bụ nke gbara na mpaghara dị na ekwentị na-achọpụta rụọ ojiji ihe nakawa etu, -akwadebe ngwa ọdịnala a na-ekwesịghị-eji n'otu oge mgbe nke ụbọchị ẹkedori ngwa ngwa na-enweghị impacting ndụ batrị ma ọ bụ arụmọrụ.
Huawei azọrọ usoro ga-enwe ike na-agba ọsọ na-arụzi eme n'otu ntabi anya, -ewepụsị ihe dị cruft na na-na na ekwentị na-agba ọsọ dị ka ọhụrụ afọ abụọ ala akara. Jiri ya tụnyere gara aga nsụgharị nke ụlọ ọrụ ahụ si software, ọ na-atụ anya na-agba ọsọ 80% ngwa ngwa mgbe a afọ.
Huawei ọhụrụ mmetụta uche UI 5 -aj u ala visual customization nke ọkọlọtọ Android, nke ụlọ ọrụ na-enwe olileanya ga-kpalie n'ebe ọdịda anyanwụ buyers. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The Ma Ọ Bụ Nwunye 9 nnukwu batrị nwekwara Huawei ọhụrụ ngwa-ngwa-odori usoro, nke dị OnePlus si Dash Charge, -akpali ụfọdụ n'ime ngwá electronic chọrọ iji n'enweghị ana a batrị na elu voltaji n'ime chaja. The ụlọ ọrụ na-azọrọ na ọhụrụ ụgwọ usoro ga-enwe ike iru 58% batrị ike na 30 nkeji, na a zuru ụgwọ na 90 nkeji.
"Battery management nnyocha na mmepe a rụrụ n'ime ụlọ, ma nye na-adịbeghị anya na nmepe anyị na-na upped nnyocha na mmepe na-emefu iji jide n'aka na ọ dịghị ihe yiri ike ime. Anyị na-anọ a afọ na-eru eru na ule components dị ka batrị ma internally na externally tupu na-aga na-ere,"Kwuru Ed Gemmell, Huawei si n'ji ego otu onye nduzi nke nkwukọrịta.
Tablet ahịa, tinyere PC ahịa, bụ shrinking, dị ka ihe ndị na-eji ha ama-dị ka ha bụ isi Mgbakọ ngwaọrụ. Ma ma European na US na-eji ọkụ ga-ewe ndị dị otú ahụ a nnukwu ama anọgide na-hụrụ.
A mmachi mbipụta Ma Ọ Bụ Nwunye 9 Porsche Design variant, na a nta 5.5in quad HD curved ihuenyo na yiri nkọwa ga-abụ dị na UK na EU efu € 1.395 (£ 1.238), ma ọ bụghị dị na United States.
A n'akụkụ-na-n'akụkụ size tụnyere onye nke Google Pixel XL n'aka-nri, ọhụrụ Huawei Ma Ọ Bụ Nwunye 9 na ekpe. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
38845	3 Android, Nkeji edemede, Huawei, mobile igwe, News, phablets, Samuel Gibbs, Smartphones, Technology, UK Technology
← Google Pixel Review Amazon ikwughachi: Nke mbụ 13 Ihe Gbalịa →